NEBOSH ကဘာလဲ? | Simply Safety Blog
Posted by administrator on 13 Aug 2017 14:30:33
အလုပ်အကိုင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက် NEBOSH သို့မဟုတ်အမျိုးသားစာမေးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ကျန်းမာရေး, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု & သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရည်အချင်းများပို့နေတဲ့ဗြိတိန်အခြေစိုက်လွတ်လပ်သောစာမေးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ NEBOSH 1979 NEBOSH တစ်ကုသိုလ်ဖြစ် status ကိုရှိပါတယ်အတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ NEBOSH ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအရည်အချင်းများ၏ကျယ်ပြန့ပေးထားပါတယ်။ NEBOSH အဆိုပါစာမေးပွဲလိုအပ်ချက်နှင့်သင်ယူမှုရလဒ်များသတ်မှတ်။ NEBOSH လေ့ကျင့်ရေးပံ့ပိုးပေး NEBOSH စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သင်တန်းဒီဇိုင်းရန်ရှိသည်။ NEBOSH ကမ္ဘာပေါ်မှာအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာသည်။ တစ်ဦး NEBOSH အရည်အချင်းများကိုကိုင်ထားကြောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြား NEBOSH (သို့မဟုတ် NEBOSH စာမေးပွဲယူမှသူတို့ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားကြသူမဟုတ်ဘဲ NEBOSH လေ့ကျင့်ရေးပံ့ပိုးပေး) 180,000 ကျော်ရှိပါတယ်။
NEBOSH NEBOSH သင်တန်းများသို့မဟုတ်အခြားသင်တန်းများမကယ်မနှုတ်ပါဘူး။ NEBOSH ယင်း၏အရည်အချင်းများများအတွက် syllabuses ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့် NEBOSH အကဲဖြတ်၏နည်းလမ်းများသတ်မှတ်။ အကဲဖြတ်၏နည်းလမ်းများ NEBOSH စာမေးပွဲနှင့်လက်တွေ့သင်ခန်းစာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ NEBOSH သင်တန်းများ NEBOSH အသိအမှတ်ပြုသင်တန်း Providers ဖြင့်ကယ်လွှတ်နေကြသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း 50000 ကျော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ NEBOSH ကမ္ဘာတဝှမ်း 40 ကျော်နိုင်ငံများတွင်အခြေစိုက် 600 ကျော် NEBOSH သင်တန်းအမှတ်စဥ် Providers ရှိပါတယ် NEBOSH အရည်အချင်းများကိုတကျရောကျစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ NEBOSH 2014-2015 ခုနှစ်တွင် 132 ကျော်နိုင်ငံများတွင်ခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းကို 180,000 NEBOSH အကဲဖြတ် (ဒီဗြိတိသျှကောင်စီကွင်း၏ NEBOSH လေ့ကျင့်ရေးပံ့ပိုးပေးနေရာများအတွက်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်) ရှိကဖော်ပြသည်။ NEBOSH အရည်အချင်းများသက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အလောင်းတွေကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။ NEBOSH အရည်အချင်းများအသိအမှတ်ပြုသောသူတို့၏တချို့ကအလုပ်အကိုင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေး (IOSH) ၏ Institution ကိုအန္တရာယ် & အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏နိုင်ငံတကာအင်စတီကျု (IIRSM) နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အကဲဖြတ် (IEMA) ၏ Institute မှပါဝင်သည်။
1974 ခုနှစ်တွင်ကျန်းမာရေးနှင့်လုပ်ငန်းခွင်အက်ဥပဒေမှာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဗြိတိန်မှာအလုပ်မှာကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်။ ရလဒ်အဖြစ်, ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအရာရှိတဦးနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမန်နေဂျာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဗြိတိန်အလုပ်ခွင်တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ကျန်းမာရေး၏ဧရိယာ၌သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရည်အချင်းများ၏ပြဌာန်းချက်အဘို့ဤလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့, အလုပ်အကိုင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေး NEBOSH အမျိုးသားစာမေးပွဲဘုတ်အဖွဲ့စက်တင်ဘာလ 1979 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး NEBOSH Leicester အတွက် operating စတင်ခဲ့သည်။ NEBOSH နေဆဲ Leicester ကနေလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ထိုအခါ NEBOSH ဘုတ်အဖွဲ့က၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအထဲက set: "အလုပ်အကိုင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အသက်မွေးမှုအရည်အချင်းများနှင့်အတူလူများ၏အရည်အသွေး & အရေအတွက်တိုးတက်စေရန်"
ပထမဦးဆုံးအ NEBOSH တွဲဘက်အဆင့်နှင့်အဖွဲ့ဝင်အဆင့်စာမေးပွဲ 1980 ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေငါးခု NEBOSH စာတမ်းများထိုင်လျက်ဇွန်လထဲမှာရာအရပျကို ယူ. , ဥပဒေ, အမူအကျင့်သိပ္ပံ; အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏နည်းစနစ်; အလုပ်အကိုင်ကျန်းမာရေး & တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အထွေထွေသိပ္ပံ။ NEBOSH အရည်အချင်းများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကြီးထွားစပြုလာသည်။ သူတို့ရဲ့ NEBOSH သာမန်အဆင့်ကိုလက်မှတ်နှင့်အဆင့်မြင့် level ကိုလက်မှတ် 84 များအတွက်မှတ်ပုံတင်ဇွန်လ 1982 ခုနှစ်တွင် 140 ကလူ။ 1986 အသုံးပြုပုံ NEBOSH မှသုံးနှစျခုကနေနှစ်စဉ်စာမေးပွဲအစည်းအဝေးများ၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 1987 ခုနှစ်တွင် NEBOSH တစ် NEBOSH လက်မှတ်နှင့် NEBOSH ဒီပလိုမာပါဝင်သည်ရာသစ်တစ်ခု NEBOSH အရည်အချင်းများဖွဲ့စည်းပုံ, မိတ်ဆက်ပေးသည်။ 1988 ခုနှစ်တွင် NEBOSH ဒီပလိုမာအဆင့်အထိအရည်အချင်းများလေး3နာရီစာမေးပွဲနှင့်တစ်ဦးအမှုလေ့လာမှုပြီးစီး feature သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
1990 ခုနှစ်, NEBOSH တရားဝင် IOSH ကနေသူ့ဟာသူခွဲခြားရန်စတင်ခဲ့သည်။ မတ်လ 1992 ခုနှစ်မှာ NEBOSH ကုမ္ပဏီများအိမ်နှင့်အတူကန့်သတ်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ထည့်သွင်း။ ဧပြီလ 1992 မှာတော့ NEBOSH သည့်ဒါနကော်မရှင်နှင့်အတူတစ်ဦးမေတ္တာအဖြစ်မှတ်ပုံတင်။ 1992 ခုနှစ်တွင် NEBOSH အထူးကုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဒီပလိုမာအတွက် NEBOSH ဆောက်လုပ်ရေးလက်မှတ်အားဖြင့်မကြာမီနောက်တော်သို့လိုက်, ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
2000 ခုနှစ်တွင်အရည်အချင်းများနှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအာဏာပိုင် (QCA) - ယခုအဆိုပါအဆိုပါအရည်အချင်းများရုံးနှင့်စာမေးပွဲ Regulator (Ofqual) သည့်ဆုပေးပွဲခန္ဓာကိုယ်အဖြစ် NEBOSH အသိအမှတ်ပြု။ NEBOSH သစ်နှစ်မျိုးကိုအရည်အချင်းများသည် NEBOSH မီးသတ်လက်မှတ်နှင့် NEBOSH အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအထွေထွေလက်မှတ်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ NEBOSH အထူးကုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဒီပလိုမာပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနှင့် 2010 ခုနှစ်တွင်စက်တင်ဘာလ 2008 ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် NEBOSH ဒီပလိုမာအမည်ပြောင်းခဲ့သည်လေးကပို NEBOSH အရည်အချင်းများဖြန့်ချိခဲ့ကြသည် - လုပ်ငန်းခွင်မှာကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် NEBOSH ဆုချီးမြှင့်ခြင်း, NEBOSH ကျန်းမာရေးနှင့်ကောင်းပြီ-ဖြစ်ခြင်းလက်မှတ်, အ NEBOSH အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးလက်မှတ်နှင့် NEBOSH နိုင်ငံတကာနည်းပညာလက်မှတ်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စစ်ဆင်ရေးအတွက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး။
2011 ခုနှစ်တွင် NEBOSH အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားဗြိတိန်နှင့်နိုင်ငံတကာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလောင်းတွေ, ထိုအလုပ်အကိုင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတိုင်ပင်ခံမှတ်ပုံတင်မည် (OSHCR) အတွက်အလွယ်တကူရှာဖွေငှားရမ်းရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အလုပ်ရှင်များအဘို့အအရည်အချင်းပြည့်မီကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတိုင်ပင်ခံတစ်ဗဟိုကျင်းပမှတ်ပုံတင်ပေးပါသည်သောအစီအစဉ်အစီအစဉ်တီထွင် အလုပ်၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရပ်တို့ကိုအဘို့။
2014 ခုနှစ်တွင် NEBOSH Hull ကတက္ကသိုလ်နှင့်အတူပူးတွဲမာစတာဘွဲ့အခြေစိုက်သုတေသန, 2014 ခုနှစ်တွင် 2015 ခုနှစ်အတွက်ချီးမြှင့်ကိုပထမဦးဆုံးဒီဂရီနှင့်အတူ, NEBOSH တာဝန်ရှိသစ်ကို HSE စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိများမှတစ်ဘွဲ့လွန်အဆင့်ကိုအရည်အချင်းများကိုဆက်ကပ်ဖို့ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအလုပ်အမှုဆောင် (HSE) နဲ့အလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့သည် ဗြိတိန်အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပညတ်တရား၏ဘက်တော်သားသည်။
အဆိုပါ NEBOSH ထောက်ခံသင်ရိုးညွှန်းတမ်း / ဖတ်စာအုပ်များတချို့ရှိနေပါတယ်
H ကိုမှနိဒါန်း - အလုပ်အကိုင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေလက်မှတ်များအတွက်
NEBOSH k bharlell?
aaloteaakine aantararal kainnshinnrayy nhaintkyannmarrayyaatwat NEBOSH shoetmahote aamyoesarr hcarmayypwal bhoteaahpwal kyannmarrayy, bhayy kainnlonehkyuanmhu & sabharwapaatwaannkyinsineraralaeakyint myarr nhaint hceman hkaant hkwal mhuaatwat saat mway wam kyaungg aaraiaahkyinnmyarr phoet nay tae byai tein aahkyayhcite lwatlautsaw hcarmayypwal bhoteaahpwal hpyitpartaal . NEBOSH 1979 NEBOSH taitkusolhpyit status ko shipartaal aatwat hpwalhcaee hkaeparsai . NEBOSH bhayy kainn lonehkyuanmhu aaraiaahkyinn myarreat kyaal pya n payyhtarrpartaal . NEBOSH aasopar hcarmayypwal loaauthkyet nhaint sainyuumhu raladmyarr saatmhaat . NEBOSH lae kyint rayy panpoepayy NEBOSH hcanhkyane hcan nywhaann myarr nhaint twaesoneraan saintaann dejine raan shisai . NEBOSH kambharpawmhar aalwan raypaannhcarr hpyitlarsai . tait u NEBOSH aaraiaahkyinnmyarr ko kine htarrkyaungg lae kyintsainkyarr NEBOSH (shoetmahote NEBOSH hcarmayypwal yuu mha suuthoetko lae kyint sainkyarr kya suumahotebhell NEBOSH lae kyint rayy panpoe payy) 180,000 kyaw shipartaal .
NEBOSH NEBOSH saintaannmyarr shoetmahote aahkyarr saintaannmyarr m kaal m nhuat parbhuu . NEBOSH yainneat aaraiaahkyinnmyarrmyarraatwat syllabuses hpwanhpyaoe hkyinnnhaint NEBOSH aakellhpyat eat naeelammyarr saatmhaat . aakellhpyat eatnaeelammyarr NEBOSH hcarmayypwal nhaint laattwae sainhkaannhcar hpyitninepartaal . NEBOSH saintaannmyarr NEBOSH aasiaamhaatpyusaintaann Providers hpyang kaal lwhaat naykyasai .
nhaithcainnhaittine 50000 kyawkohcarrlhaallaunggmyarr NEBOSH kambhartawham 40 kyaw ninenganmyarrtwinaahkyayhcite 600 kyaw NEBOSH saintaannaamhaathcin Providers shipartaal NEBOSH aaraiaahkyinnmyarr ko takyarawkya hcatewainhcarr hpyitkyasai . NEBOSH 2014-2015 hkunhaittwin 132 kyaw ninenganmyarrtwin hkawsaungswarraakyaunggko 180,000 NEBOSH aakellhpyat ( de byaitish kaunghce kwineat NEBOSH lae kyint rayy panpoe payynay rar myarraatwat hpyithcay par lain maal) shi k hpawpyasai . NEBOSH aaraiaahkyinnmyarr saatsinerar parawhpaatshinnaal aahpwalwainaahpyit aalaunggtway k aasiaamhaatpyu htarrparsai . NEBOSH aaraiaahkyinnmyarr aasiaamhaatpyu saw suuthoeteat tahkyahoetk aaloteaakine aantararal kainnshinnrayy nhaintkyannmarrayy (IOSH) eat Institution koaantararal & aantararal kainnshinnrayy hceman hkaant hkwal mhu eat ninengantakar aain hc te kyau (IIRSM) nhaint paatwaannkyinsinerar hceman hkaant hkwal mhu nhaintaakellhpyat (IEMA) eat Institute mha parwainsai .
1974 hkunhaittwin kyannmarrayy nhaint lotengaannhkwin aaat upadaymhar aantararal kainnshinnrayy byai tein mhar aalotemhar kyannmarrayy nhaint bhayy kainn lonehkyuanrayy myarreat hceman hkaant hkwal mhuaatwat yaybhuyya hcaee myain hcaeekammyarr hkyamhaat . raladaahpyit, kyannmarrayy nhaint bhayy kainn lonehkyuanrayyaararshi t u nhaint kyannmarrayy nhaint bhayy kainn lonehkyuanrayy maannaygyaar eat aahkaannkandako byai tein aalotehkwin twin pomo kyaal pya an hpyitlarhkaepartaal . lotengaannhkwin bhayy kainn lonehkyuanmhu nhaint kyannmarrayy eat eriyar saat mway wam kyaungg aaraiaahkyinn myarreat pyahtarannhkyetabhhoet i loaauthkyet hpya i saee hphoet, aaloteaakine aantararal kainnshinnrayy nhaintkyannmarrayy NEBOSH aamyoesarr hcarmayypwal bhoteaahpwalhcaattainbharl 1979 hkunhaittwin hcataintaihtaunghkaepyee NEBOSH Leicester aatwat operating hcatainhkaesai . NEBOSH naysell Leicester k nay lotekine lyetshikyaungg sirasai . htoaahkar NEBOSH bhoteaahpwal k ၎inneat aadhikarairwalhkyetmhar aahtellk set: " aaloteaakine aantararal kainnshinnrayy nhaint kyannmarrayyaatwat aasaatmwaymhu aaraiaahkyinnmyarr nhang aatuu luu myarreataaraiaasway & aarayaatwat toetaat hcayraan"
pahtam u sonea NEBOSH twalbhaat aasaint nhaint aahpwalwain aasanghcarmayypwal 1980 kohcarrlhaallaunggtwayngarrhku NEBOSH hcartammyarr htine lyet jwanl htellmhar rarar pyako yuu. , upaday,amuuakyint sippan; aantararal kainnshinnrayy hceman hkaant hkwal mhu eat naeehcanait; aaloteaakinekyannmarrayy & taitkorai saant shinn rayy nhaint aahtwayhtway sippan . NEBOSH aaraiaahkyinn myarreat aasiaamhaatpyumhu kyeehtwarr hc pyu larsai . suuthoetrae NEBOSH sarmaan aasaint ko laatmhaat nhaint aasaintmyint level kolaatmhaat 84 myarraatwat mhaatponetainjwanl 1982 hkunhaittwin 140 k luu . 1986 aasonepyupone NEBOSH mha sone nha hcya hku k nay nhaithcain hcarmayypwal aahcaeeaawayy myarreat nanparat toemyahain hkaesai . hpayhpawwarrel 1987 hkunhaittwin NEBOSH tait NEBOSH laatmhaatnhaint NEBOSH depalomar parwainsai rar saittaithku NEBOSH aaraiaahkyinnmyarr hpwalhcaeepone, matesaatpayysai . 1988 hkunhaittwin NEBOSH depalomar aasaint aahti aaraiaahkyinnmyarrlayy3narre hcarmayypwal nhang tait uamhu laelarmhupyeehcee feature shoet pyaungglell hkaesai .
1990 hkunhait, NEBOSH tararrwain IOSH k nay shuharsuu hkwalhkyarr raan hcatainhkaesai . maatl 1992 hkunhaitmhar NEBOSH kumpanemyarr aain nhaint aatuu k an saat kumpane aahpyit htaeet swin . epyel 1992 mhartot NEBOSH saeet darn kawmashin nhang aatuu tait u mayttar aahpyit mhaatponetain . 1992 hkunhaittwin NEBOSH aahtuuku paatwaannkyinhteinsaimrayy depalomaraatwat NEBOSH soutloterayy laatmhaat aarr hpyint makyaarme nouttaw shoet lite, hpya an hkyai hkaesai .
2000 hkunhaittwin aaraiaahkyinnmyarr nhaint sainroenywhaanntamaarnarpine (QCA) - yahku aasopar aasopar aaraiaahkyinnmyarr rone nhainthcarmayypwal Regulator (Ofqual) saeet supayypwal hkandharkoaahpyit NEBOSH aasiaamhaatpyu . NEBOSH sait nhaitmyoeko aaraiaahkyinnmyarrsai NEBOSH meesaat laatmhaatnhaint NEBOSH aapyipyisinerar aahtwayhtway laatmhaat hcatain saungrwathkaesai . aasopar NEBOSH aahtuuku paatwaannkyinhteinsaimrayy depalomar pyanlai pyinsainhtarrsawnhaint 2010 hkunhaittwinhcaattainbharl 2008 hkunhait paatwaannkyin hceman hkaant hkwalmhuaatwat NEBOSH depalomar aamaipyaungg hkaesai layy kapo NEBOSH aaraiaahkyinnmyarr hpya an hkyaihkaekyasai - lotengaannhkwinmhar kyannmarrayy nhaint bhayy kainnlonehkyuanrayyaatwat NEBOSH su hkyaeemyaha in hkyinn, NEBOSH kyannmarrayy nhaint kaunggpye- hpyithkyinn laatmhaat,aNEBOSH aapyipyisinerar soutloterayy laatmhaatnhaint NEBOSH ninengantakar naeepanyar laatmhaat ray nan nhaint sabharwadharatngwae hcaitsainrayy aatwat aantararal kainnshinnrayy .
2011 hkunhaittwin NEBOSH aahpyit kaungghcwar kaeshoetsaw aahkyarr byai tein nhaint ninengantakar parawhpaatshinnaal aalaunggtway, hto aaloteaakine aantararal kainnshinnrayy nhaint kyannmarrayy aatinepainhkanmhaatponetainmai (OSHCR) aatwat aalwaltakuu sharhpway ngharram raan hceepwarrrayylotengaannmyarr nhaint aaloteshinmyarrabhhoetaaaraiaahkyinn pyany me kyannmarrayy nhaint bhayy kainn lonehkyuanrayy aatinepainhkan tait baho kyinnp mhaatponetain payyparsai saw aahceaahcain aahceaahcaintehtwin aalote eat suuthoetrae kopine aaraut thoetkoabhhoet .
2014 hkunhaittwin NEBOSH Hull k takkasol nhaint aatuu puutwal marhcatar bhwal aahkyayhcite sutaysan, 2014 hkunhaittwin 2015 hkunhaitaatwat hkyaeemyaha in ko pahtam u sone degare nhang aatuu, NEBOSH tarwaanshi saitko HSE hconehcamhcaitsayyrayy aararshimyarr mha tait bhwal lwan aasaint ko aaraiaahkyinnmyarr ko saatkaut hphoet kyannmarrayy nhaint bhayy kainn lonehkyuanrayyaaloteaamhusaung (HSE) nae aalotelotehcatainhkaesai byai tein aatwat bhayy kainn lonehkyuanmhu panyaat tararr eat bhaattawsarr sai .
aasopar NEBOSH htouthkansainroenywhaanntam / hpaat hcaraotemyarr tahkyahoetshinaypartaal
H ko mhanidarann - aaloteaakine kyannmarrayy nhaint bhayy kainn lonehkyuanrayyaatwat aamyoesarrdemokarayhceaahpwalhkyaote aahtwayhtway laatmhaatmyarr aatwat